Ambongadiny entana avo lenta entana poza fako ho an'ny alika mpiompy alika poop fako alika fako biodegradable. mpanamboatra sy mpamatsy | Skypurl
Ny kitapo paompy biby 100% simba sy azo zezika dia vita amin'ny starch mais sy PBAT. Kitapo fakana poop dia tsy maintsy ananan'ny olona kanto mandehandeha amin'ny alika, kitapo mifantina poop amin'ny biby fiompy. Rehefa mivoaka ny alika dia afaka mampiasa azy io haka ny kotrana. Madio kokoa izy io ary mety kokoa, tsy handoto ny tanan'ny tompony, ary hisoroka ny fandotoana ny tontolo iainana. Izy io dia fisehoan'ny fiaraha-miaina ny sivilizasiôna sy ny fitondran-tena.
zavatra Kitapo poopan'ny biby azo ovaina
Anaran'ny marika Skypurl
Size 22cm * 33cm
Quantity 15pcs / roll
endri-javatra Fanoherana azo zezina / tomany / tsy mahazaka rano
ara-nofo PLA / PBAT / Zana-katsaka
Loko Maintso, mainty na takiana aminao
Karazana Aforeto kitapo
Fampiharana Kitapo paompy biby
Famantarana Skypurl / Namboarina araka izay irinao
Kitapo paompy biby feno biby feno simba tanteraka dia azo ampiasaina amin'ny vala, làlana, zaridaina ary toerana hafa ho an'ny alika mandeha an-tongotra. Aorian'ny fivoahan'ny alika dia alao ny kitapo iray ary alao izany nefa aza maloto tanana.
1. Fitaovana biodegradable azo zezika: zana-katsaka sy PBAT.
2. Fampisehoana famehezana tsara: Ny vokatra dia tsy tantera-drano ary manitra insulate.
3. Texture: malefaka sy mahazo aina, mahatsapa kilasy voalohany.
4. Porofon-diloilo sy porofon-drano: vita amin'ny akora zavamaniry, ny tany dia tsy halefaka.
5. Famolavolana teboka: mora idirana, esory fotsiny.
6. OEM / ODM / namboarina:Haben'ny namboarina, loko, lamina, fonosana, boaty ivelany.
Teo aloha: Kaontenera azo vonoina toy izany & voankazo
Manaraka: Mpamatsy vidin'ny orinasa mpanamboatra mpamatsy vidin'ny kitapo 100% harona plastika azo simba
Kitapo alika masiaka voajanahary
Kitapo alika ambongadiny
Mpamatsy vidin'ny orinasa mpamokatra vidin-javatra ...